Abenzi nabahlinzeki be-SFP Transceiver Module | I-China SFP Transceiver Module Factory
I-10Gb / s 40KM SFP + Ama-Transceivers Optical OPS551X3CDL40
Ama-transceivers we-OPS551X83CDL40 10G SFP + aklanyelwe i-10G Ethernet 10G BASE-ER / EW ngo-802.3ae, futhi ingaxhasa isilinganiso sedatha kusuka ku-1.25Gb / s kuye ku-11.1Gb / s. . Izici.
Ama-transceivers optical we-OPSP311X3CDL10 enzelwe i-10Gb / s serial optical interface yokuxhumana kwedatha nge-single mode fiber (SMF). I-transceiver ingakwazi ukusekela i-9.953- 11.1Gb / s. Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza izindleko ukuhlinzeka amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu zedatha. Izici.
I-10Gb / s iDemo-Wavelength Plugable SFP Transceiver OPSP851X3CDLM
Ama-transceivers optical we-OPSP311X3CDL10 enzelwe i-10Gb / s serial optical interface yokuxhumana kwedatha nge-single mode fiber (SMF). I-transceiver ingakwazi ukusekela i-9.953- 11.1Gb / s. Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza izindleko ukuhlinzeka amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu zedatha. Izici ● I-plugable eshisayo ● I-10Gb / s serial interface interface ● Kufika ebangeni elingu-10km ● Kuhambisana ne-SFP + MSA ● Iphakethe le-SFP MSA elinesixhumi se-LC esiphindwe kabili ● Ukuqapha kweDijithali ...
I-10Gb / s 80KM SFP + Ama-Transceivers Optical OPSP551X3CDL80
Ama-transceivers we-OPSP551X3CDL80 10G SFP + aklanyelwe i-10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW nge-802.3ae, futhi ingaxhasa isilinganiso sedatha kusuka ku-1.25Gb / s kuye ku-11.1Gb / s. Ukuxilongwa kwedijithali kuyatholakala nge-interface ye-I2C njengoba kucacisiwe ku-SFP + MSA . Izici ● I-10Gb / s serial interface interface ethobela i-802.3ae 10GBASE-ZR / ZW ● Isixhumi esibonakalayo sikagesi esivumelana ne-SFF-8431ukucaciswa kokuthuthuka kwe-8.5 no-10 Gigabit module form pluggable module “SFP +” ● 2-wire ...
I-10Gb / s SFP + BIDI Ama-Transceivers Optical OPSB321X3CDL10
Ama-transceivers optical we-OPSPB321X3CDL10 enzelwe i-10Gb / s serial optical interface yokuxhumana kwedatha ne-single mode fiber (SMF). I-transceiver ingakwazi ukusekela i-9.953- 11.1Gb / s. Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza izindleko ukuhlinzeka amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu zedatha. Izici ● I-hot pluggable ● 10Gb / s serial optical interface ● Kufika ebangeni elingu-80km ● Kuhambisana ne-SFP MSA ● Iphakethe le-SFP MSA elinesixhumi se-LC duplex ● I-Digital Diagnostic Monit ...
I-10Gb / s SFP + Bidi Optical Transceivers OPSPB231X3CDL10
I-10Gb / s 1550nm Amanani amaningi we-XFP Optical Transceivers OPXP551X3CDL40
Ama-transceivers we-OPXP551X3CDL40 10G 1550nm XFP aklanyelwe ama-transceivers e-10G Ethernet 10G BASE-ER / EW nge-802.3ae ne-10G SONET OC-192 / SDH STM-64, futhi ingaxhasa isilinganiso sedatha kusuka ku-9.953Gb / s kuye ku-11.1Gb / s. Ukuxilongwa kwedijithali kuyatholakala nge-interface ye-I2C njengoba kuchaziwe ku-XFP MSA. Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza izindleko ukuhlinzeka amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu zezinhlelo zokusebenza ze-datacom ne-telecom. Izici ● I-plugable eshisayo ● Isekela ama-9.95Gb / s kumazinga we-11.1Gb / s ● I-Bel ...
I-10Gb / s 1310nm Amanani amaningi we-XFP Optical Transceivers OPXP311X3CDL10
Ama-transceivers we-OPXP311X3CDL10 10G 1310nm XFP aklanyelwe i-10G Ethernet 10G BASE-LR / LW nge-802.3ae ne-10G SOI OC-192 / SDH STM-64, futhi ingaxhasa isilinganiso sedatha kusuka ku-9.953Gb / s kuye ku-11.1Gb / s. ukuxilongwa kuyatholakala nge-interface ye-I2C njengoba kucacisiwe ku-XFP MSA. Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza izindleko ukuhlinzeka amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu zezinhlelo zokusebenza ze-datacom ne-telecom. Izici ● I-hot pluggable ● Support 9.95Gb / s to 11.1Gb / s bit rates ● Ngezansi ...
I-10Gb / s 850nm Amanani amaningi we-XFP Optical Transceivers OPXP851X3CDLM
Ama-transceivers we-OPXP851X3CDLM 10G 850nm XFP aklanyelwe i-10G Ethernet 10G BASE-SR / SW nge-802.3ae, futhi ingaxhasa isilinganiso sedatha kusuka ku-9.953Gb / s kuye ku-11.1Gb / s. Ukuxilongwa kwedijithali kuyatholakala nge-interface ye-I2C njengoba kucacisiwe ku-XFP Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza izindleko ukuhlinzeka amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu zezinhlelo zokusebenza ze-datacom ne-telecom. Izici ● I-plugable eshisayo ● Ukusekela i-9.95Gb / s kumazinga wamabhithi we-11.1Gb / s ● Ngaphansi kokusetshenziswa kwamandla ka-2.5W ● I-XFP MSA ...
I-10Gb / s 1550nm Amanani amaningi we-XFP Optical Transceivers OPXP551X3CDL80
Ama-transceivers we-OPXP551X3CDL80 10G 1550nm XFP aklanyelwe i-10G Ethernet 10G BASE-ZR / ZW nge-802.3ae ne-10G SONET OC-192 / SDH STM-64, futhi ingaxhasa isilinganiso sedatha kusuka ku-9.953Gb / s kuye ku-11.1Gb / s. ukuxilongwa kuyatholakala nge-interface ye-I2C njengoba kuchaziwe ku-XFP MSA. Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza izindleko ukuhlinzeka amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu zezinhlelo zokusebenza ze-datacom ne-telecom. Izici ● I-hot pluggable ● Support 9.95Gb / s to 11.1Gb / s bit rates ● Be ...
I-10Gb / s Bidi Multi-rate XFP Optical Transceivers OPXPB321X3CDL10
Ama-transceivers we-OPXPB321X3CDL10 10G XFP BIDI enzelwe i-10G Ethernet 10G BASE-LR / LW nge-802.3ae ne-10G SOI OC-192 / SDH STM-64, futhi ingasekela isilinganiso sedatha kusuka ku-9.953Gb / s kuye ku-11.1Gb / s. Ukuxilongwa kwedijithali kuyatholakala nge-interface ye-I2C njengoba kuchaziwe ku-XFP MSA. Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza izindleko ukuhlinzeka amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu zezinhlelo zokusebenza ze-datacom ne-telecom. Izici ● I-hot pluggable ● Support 9.95Gb / s to 11.1Gb / s bit rates ● Ngezansi ...
I-10Gb / s Bidi Multi-rate XFP Optical Transceivers OPXPB231X3CDL10
Ama-transceivers we-OPXPB231X3CDL10 10G XFP BIDI aklanyelwe ama-transceivers e-10G Ethernet 10G BASE-LR / LW nge-802.3ae ne-10G SOI OC-192 / SDH STM-64, futhi ingaxhasa isilinganiso sedatha kusuka ku-9.953Gb / s kuye ku-11.1Gb / s. ukuxilongwa kuyatholakala nge-interface ye-I2C njengoba kucacisiwe ku-XFP MSA. Imiklamo ye-transceiver yenzelwe ukusebenza okuphezulu futhi ibiza izindleko ukuhlinzeka amakhasimende izixazululo ezinhle kakhulu zezinhlelo zokusebenza ze-datacom ne-telecom. Izici ● I-hot pluggable ● Support 9.95Gb / s to 11.1Gb / s bit rates ● Ngezansi ...